နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဥပဒ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း 51 ၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး၏ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲမှာ
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၅၁ ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေတွင်မည်သည့်ဆောင်းပါးသည်မိမိကိုယ်ကို၊ မိမိချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းသက်သေခံရန်အခွင့်အရေးမပေးသောရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးပုဒ်မ ၅၁ ။
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရှိရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသူများ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကားအဘယ်နည်း။ စောင့်ကြည့်။ ... နှာခေါင်းကိုကောက်ခြင်း .. မဲဆန္ဒရှင်များအတွက်…လေ့လာသူတစ် ဦး သည် - - မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း၊ - သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဲရုံတွင်နေရမည်။
လျော်ကြေး - ဤစကားလုံး၏အဓိပ္ပါယ်ကိုသိပ္ပံပညာတွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာလျော်ကြေးငွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေး၊ အသုံးမပြုသောအခွင့်အရေးအတွက်လုပ်ခ၊ ကြွေးရှင်နှင့်ကြွေးရှင်၏တန်ပြန်တောင်းဆိုမှုများကိုထေမိအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပြန်ဆပ်ခြင်းနည်းလမ်း။ ငွေပမာဏနှင့်တစ်ကြိမ်တည်းထုတ်ပေးခြင်း ...
ဘယ်စာရွက်စာတမ်းကရုရှားသည်ယူအက်စ်အက်စ်ယူအက်စ်၏တရားဝင်ဆက်ခံသူဖြစ်သည်ဟုဆိုသနည်း။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ရုရှားနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်မော်စကိုရှိသံတမန်ရေးရာဌာနအကြီးအကဲများအားရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
၎င်းသည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏သီးသန့်စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်ပါသလား။ အိုဘုရားသခင်၊ ကောင်းပါပြီ၊ စာအုပ်ဆိုင်သို့ရောက်ရှိရန်နှင့်ရုရှားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒါဇင်နှင့်ချီ။ ရယူရန်အလွန်ခက်ခဲပါသလား။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၇၁ ...
အစိုးရရာထူးများနှင့်အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများမရှိပါ။ အစိုးရ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်ပြည်သူ့ ၀ န်ထမ်းမဟုတ်ပါ၊ အစိုးရ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သာဖြစ်သည်။ "အပိုဒ် 3. ပြည်နယ်လူထုအခြေပြု ...
တွေကို RF အခြေခံဥပဒေဥပဒေ, ယင်း၏ဘာသာရပ်နှင့်သတင်းရင်းမြစ်များ၏အယူအဆ။
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ယင်း၏အကြောင်းအရာနှင့်ရင်းမြစ်များ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေသည်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိနိုင်ငံတော်အာဏာကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဤအာဏာကိုကျင့်သုံးရန်အဓိကပုံစံများ၊ နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားကြားဆက်ဆံရေး။
သမ္မတကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အာမခံချက်လား။ ရှိသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ၊ အခန်း (၄) ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းသမ္မတအပိုဒ် ၈၀ ၁။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းသမ္မတသည်နိုင်ငံတော်၏အကြီးအကဲဖြစ်သည်။ ၂။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းသမ္မတသည်ရုရှားဖယ်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအာမခံသူဖြစ်သည်။
အရာကိစ္စများတွင်တွေကို RF နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အမှုများကိုနိုင်ငံတော် Duma ပျော်ဖို့အခြေခံဥပဒေညာဘက်ရှိသနည်း
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏သမ္မတအနေဖြင့်မည်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် Duma ကိုဖျက်သိမ်းမည်နည်း။ ဤကိစ္စတွင်မူရင်းရင်းမြစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသို့လှည့်ကြည့်ကြပါစို့ ၁ ။
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ယုတ္တိနှင့်အထူး-ဥပဒေရေးရာအနက် p.4 st.15 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ?
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏အပိုဆောင်းပုဒ်မ ၁၅ အပိုဒ် ၄ ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုနှင့်အထူးဥပဒေရေးရာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဥပဒေများသည်နိုင်ငံတကာဥပဒေ၏ယေဘုယျအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားသောစံနှုန်းများနှင့်ဆန့်ကျင်။ မရပါ။ မဟုတ်လျှင်၎င်းတို့သည်မမှန်ကန်ပါ။ ၁။ Int ၏အထွေထွေအသိအမှတ်ပြုထားသောမူများနှင့်စံနှုန်းများ။ အခွင့်အရေး,…
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းမှခန့်အပ်သည့်ရာထူးများစာရင်းရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၈၃ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းသမ္မတသည် - (က) နိုင်ငံတော် Duma ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ရုရှားပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ဥက္ကChairman္ဌကိုခန့်အပ်ခြင်း၊ d) ပြည်နယ် Duma ကိုကိုယ်စားပြုတယ် ...
ဥပဒေပြုရေး။ ဒီမှာကဖက်ဒရယ်ညီလာခံကကိုယ်စားပြုသည်။ အခြားမည်သည့်မေးခွန်းများရှိ ဦး မည်နည်း။ ) ရုရှားတွင်ဥပဒေပြုအာဏာကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တို့ပါဝင်သောနှစ်နှစ်ဖက်ဒရယ်ညီလာခံကကိုယ်စားပြုသည်။
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံး၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ "ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးနှင့် ပတ်သက်၍" အပိုဒ် ၁ - ရုရှားဖယ်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရထိန်းချုပ်သောတရားရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
Art 49 ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပိုဆောင်းဆောင်းပါး။ 49 အပြစ်ကင်းစင်၏ယူဆချက်; APC RF အနုပညာ။ 49 တောင်းဆိုမှု၏အခြေခံသို့မဟုတ်ဘာသာရပ်ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ တောင်းဆိုမှုပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ တောင်းဆိုမှုအားစွန့်လွှတ်ခြင်း၊ တောင်းဆိုချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊
ရုရှားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ 24ya ဆောင်းပါး
အပိုဒ် ၂ အရရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၄ ခု။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၄“ ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များနှင့်ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ သူတို့၏အရာရှိများသည်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလူတိုင်းအားပေးအပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
အပေါ် Posted 22.08.2017 18.09.2018
သီးခြားစီဖြစ်သည့်တစ်ခုချင်းစီ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏အဆင့်များကိုဖော်ပြပါ။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသောရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပခြင်းနှင့်ကျင်းပခြင်း။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအတော်အတန်လွတ်လပ်သောအဆင့်များပါဝင်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ရုရှားနိုင်ငံ၏ပြည်နယ်ပိုင်နက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုမည်သို့ဖော်ပြထားသနည်း။ ငါကတကယ့်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ဖက်ဒရေးရှင်းလား၊ ခေါင်းစဉ်သည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ အပိုဒ် ၁ ၁။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း - ရုရှား ...
လူ့အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်၏အဓိကအမျိုးအစားများ။ အဖြေရှာဖို့ကူညီပါ။ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုအခြေခံ (ခွဲခြား၍ မရသော) အခြေခံ၊
ဖောက်သည်တစ် ဦး ကလက်ဆောင်လက်မှတ်ကိုစတိုးဆိုင်သို့ပြန်ပေးလို့ရပါသလား။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ လက်မှတ်ကိုငွေသားဖြင့်လဲလှယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်ဆောင်လက်မှတ်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်း၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်ဆောင်သူထံလွှဲပြောင်းပေးရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုအတည်ပြုသည့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။
အဘယ်သူသည်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများကဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဲဒီအစား, သူတို့ oa ထင်ရှား။ ,
အခုတော့ OJSC နှင့် CJSC ဖယ်ရှားပါပြီ။ OA အစားပေါ်လာသည်။ အမှန်မှာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တရား ၀ င်ပုံစံများရှိသော်လည်း OJSC အများစုသည်အများပိုင်မဟုတ်သောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ သူတို့မဟုတ်…
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,926 စက္ကန့်ကျော် Generate ။